Salady akoho klasika - Fomba Fanamboarana
salady kôkômbra misy crème marikivy sy mayo
mofomamy akondro miaraka amin'ny ronono mifangaro mamy
inona no hanompoana mofo sandwich frantsay milentika
sangria fotsy misy schnapps paiso ary segondra telo
mac sy fromazy amin'ny fatana misy ronono miakatra
Salady akoho klasika
Amin'ny salady fahavaratra rehetra, a salady akoho klasika ny fomba fahandro dia ankafizinao foana amin'ny toerana fitsangantsanganana, na barbecue, na potluck any amin'ny birao! Sombin-javatra vitsivitsy monja no azo ovaina ho salady mangatsiaka mamy na mameno sandwich na akoho salady namboarina ao an-trano!
Ataovy an-tanana io fomba fahandro mora io ho an'ny fikarakarana sandwich minitra farany rehefa tonga ny fanasana amin'ny minitra farany! Manompoa amin'ny fahavaratra ity fahavaratra ity Salady pasta italianina ary crunchy katsaram-bary voaendy amin'ny cob !
inona ny antsasaky ny ampahatelony
Akora ilaina amin'ny salady akoho
Ampiasao ny ambiny avy amin'ny sakafo hariva hariva farany na akoho rotisserie sisa na akoho voatono.
Manamboatra Akoho ho an'ny salady akoho Tiako ny mampiasa akoho voatoto na tratra akoho voahandro na feny .
Azonao atao ny mampiasa akoho am-bifotsy anaty pinch fa mazava ho azy fa ny vaoavao no tsara indrindra raha azo atao.
Ataovy azo antoka fa nangatsiaka ny akoho ary notetehina na tetehina ny akoho tao anaty sanganasa manaikitra.
Satria fomba fahandro salady akoho mahazatra ity dia notehiriziko farafahakeliny ny fanampiana. Seleria ho an'ny crunch, tongolo maitso ho an'ny tsiro.
Ity fomba fahandro ity dia azo atao amin'ny voanjo, legioma ary voankazo isan-karazany ho an'ny tsiro sy firafitra fanampiny.
Salady akoho misy voaloboka, zavokà na cranberry maina no tianao indrindra. Ny Pecans na amandy dia mifangaro tsara amin'ity fomba fahandro ity.
Ny mayonnaise no fototry ity fomba fahandro ity ary efa zaran-taona tsotra izao.
Azonao atao ny mamorona ary manolo ny sasany amin'ny mayo akanjo fiompiana na ny fomba fahandro tianao indrindra amin'ny akanjo salady.
Mamorona an Salady akoho avokado amin'ny fanoloana ny sasany amin'ny mayonnaise amin'ny avocado nopotsehina.
Ahoana ny fomba fanaovana salady akoho?
Manomàna salady akoho klasika ao anatin'ny 15 minitra miaraka amin'ireo akora tsotra vitsivitsy fotsiny.
ny fomba fanaovana makamba lo mein
mitetika akoho nandrahoina sy nangatsiaka ary apetraho ao anaty lovia lehibe misy seleria sy tongolo.
Mifangaro fitafiana anaovana fitafiana (isaky ny fomba fahandro etsy ambany) ao anaty lovia. Atsipy amin'ny akoho.
manompo amin'ny horonan-taratasy, mofo na vakana salady.
Ho an'ity fomba fanamboarana sandwich salady akoho ity dia mety hisy mofo rehetra, mihazona tsara ny silaka baguette na mofo na horonana. Ity dia karbaona ambany ambany ary tena tsara a salady atsipy koa.
REFRIGERATOR: Ao anaty kaontenera misy rivotra, ny salady akoho dia haharitra herinandro eo amin'ny vata fampangatsiahana. Omeo fikororohana izy ary hamelombelona ny tsiro amin'ny sira kely sy dipoavatra (na saribakoly Dijon mustard) dia arosoy!
FREEZER: Ny salady akoho dia tsy milay tsara. Raha te hiomana mialoha dia esory fotsiny ilay akoho ary atsiro. Rehefa vonona ny manamboatra azy dia atambaro ireo akora eto ambany ho an'ny sakafo atoandro!
Sandwich tsy maintsy andramana
Salady akoho mananasy miaraka amin'ny voaloboka - tiako indrindra amin'ny fahavaratra
Resipeo salady atody tsara indrindra - Kilasika Amerikanina rehetra!
Famonosana salady akoho amam-borona Avocado - feno tsiro
Salady Akoho Bacon Ranch - vaovao sy matsiro matsiro!
Saladin'ny Tuna mahazatra - vonona ao anatin'ny 10 minitra!
Salady Shrimp - mazava entreé mazava
Fotoana fanomananadimy ambin'ny folo minitra Fotoana manontolodimy ambin'ny folo minitra Fanompoana6 servings MpanoratraHolly Nilsson Ny fomba fahandro salady akoho mahazatra dia tiana indrindra amin'ny toerana fitsangantsanganana, na barbecue na potluck any amin'ny birao! Sombin-javatra vitsivitsy monja no azo ovaina ho salady mangatsiaka mamy na mameno sandwich na akoho salady namboarina ao an-trano! pirinty Pin
▢rOA kaopy akoho nandrahoina voatetika
▢1 salady salady voatetika
▢1 tongolo maintso diced (na chives na tongolo mena)
▢1 sotrokely Dijon Mustard
▢½ sotrokely sira voasarona
▢1 sotrokely aneta vaovao tsy voatery
ahoana no hanapahanao tadin-tsolika
Atambatra anaty lovia kely ny fangaro rehetra ary afangaro tsara.
Manaova sira sy dipoavatra mba hanandrana.
Atao toy ny sandwich na salady.
Kaloria:206,Karbohidraty:1h,Proteinina:dimy ambin'ny foloh,Tavy:16h,Tavy voky:3h,Cholesterol:48levitra,Sodium:362levitra,Potasioma:137levitra,Fibre:1h,Sugar:1h,Vitamina A:72IU,Vitamina C:1levitra,Kalsioma:10levitra,Vy:1levitra
Teny lakilesalady akoho Mazava ho azysalady masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .